Ciidamada DKMG ah oo Howlgalo lixaadleh ka wada Magaalada Muqdisho Caasimada dalka – SBC
Ciidamada DKMG ah oo Howlgalo lixaadleh ka wada Magaalada Muqdisho Caasimada dalka
Posted by editor on September 13, 2011 Comments
Howlgalo lagu sugayo amaanka ayaa waxaa ay ciidamada Dowlada KMG ah ee Soomaaliya ka wadaan qeybo badan oo ka mid ah magaalada Muqdisho caasimada dalka .
Ciidamada Dowlada KMG ah ayaa lagu arkayaa wadooyinka iyo xaafadaha magaalada Muqdisho iyagoo raxan raxan u socda islamarkaana sameynaya howlgalo culus, kaas oo ay ku baadi goobayaan dadka amaanka waxlyeeleeya .
Wadooyinka No 4,ex Control iyo wadooyin kale ayaa waxaa ay ciidamadu ku leeyihiin fariisimo ay ka duulaan kuwaas oo ay qaab rondo ah ugaga howlgalaan, waxaana inta badan ay sheegeen in ay kaga hortagayaan howlgalada falal amaan xumo oo ay ugu horeeyaan kuwo lagu abaabulo qaraxyo iyo waxyaabo la mid ah.
Ma jiraan ilaa iyo hada warar sheegaya in ciidamada dowladu ay howlgaladooda dad ku soo qabqabteen balse waxaa jira in howlgalada ay kaga hortageen ciidamada falal amaan xumo ah oo lageysanlahaa.
Dadweynaha ayaa soo dhaweynaya howlgalada ciidamada Dowlada ay ka wadaan magaalada Muqdisho kuwaas oo lagu sugaya amaanka, waxaanay ugu baaqeen ciidamada iyo dowlada KMG ah in ay sii wadaan howlgalada ceynkan oo kale ah.
ciidanka dowldo waxaay u shaqeenayaan sidii loo rabay
ilhaay hanoo dhaliyo dowlad kheery qabta